Banana Kong Blast 1.0.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.8 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Banana Kong Blast
Banana Kong Blast ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့စည်အမြောက်များသို့ Hop နှင့်တောတွင်းကျော်လွန်ကာ All-ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုပေါက်ကွဲလမ်းခရီးဘို့ကိုချွတ်ယူပါ။ ရောင်စုံ console ကိုရညျအသှေးကို 3D ဂရပ်ဖစ်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစားသောက်ပေမယ့်ရှိသမျှကိုအရသာငှက်ပျောသီးလက်လွတ်မကြဘူး! နယ်လှည့်ဟောင်ကောင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်စေသည်။ သင့်ရဲ့တိရစ္ဆာန်အမိတ်ဆွေများကိုပြန်ပေးဆွဲခံရရနှင့်က 'Jungle ဘုရင်' 'ရဲ့သူမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပြသသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်အပေါ်သွားကြဖို့ကိုပြင်ဆင်ခံရ!
တစ်ကြွင်းသောအရာလိုအပ်ပါသလား? သင်အမြဲတစ်ချိုး ယူ. သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတစ် kickback အဘို့သင့်ကြောက်မက်ဘွယ်တောတွင်းတဲသို့ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများကိုသော့ဖွင့်ဖို့အဆင့်တိုင်း၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောအပိုဆုဒင်္ဂါးပြားကိုရှာပါ: ဘယ်လိုအချို့ပျူငှါနွေးထွေးသောကော်ဇောသို့မဟုတ်စတိုင်ဦးထုပ်ကော?
- စည်မှစည်ကနေဟောင်ကောင်ကိုချွတ်ဗုံးဖို့ screen ကိုထိပုတ်ပါ။ အချိန်ကိုက်အရာအားလုံးပါ!
- lianas, စီးရေဆလိုက်နှင့်ပိုပြီး Swing!
- တိရိစ္ဆာန်မိတ်ဆွေများကိုကယ်တင်ရန်အထူးသူဌေးအဆင့်ဆင့် Beat ။
- Sonic Mania ကို Composer Tee Lopes ကနေအသံကြော!
- လူအတော်များများက hidden လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူ Highly မတူညီကြ, console ကိုရညျအသှေးကို 3D ပတ်ဝန်းကျင်။
- တစ်ဦးဖော်ရွေဝက်၏နောက်ကျောအပေါ်စီးနဲ့တူအပိုဆု Levels နဲ့!
အပို: - 48 အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ6အဆင့်ကိုအထုပ်ပါဝင်သည်!
- 38 သင်၏အတောတွင်းတဲနှင့်ဟောင်ကောင်ရဲ့ကြည့် pimp မှပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်။
Banana Kong Blast အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Banana Kong Blast အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Banana Kong Blast အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Banana Kong Blast အား အခ်က္ျပပါ
oyebahi စတိုး 81 158.54k
Banana Kong Blast ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Banana Kong Blast အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.8
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.fdg-entertainment.com/privacy-policy/
App Name: Banana Kong Blast
File Size: 263.26MB
Release date: 2019-08-31 21:20:22
လက်မှတ် SHA1: F4:6E:CC:8D:F3:E7:B0:DD:A5:0E:9E:41:3D:13:B7:F1:99:ED:E7:CE
Banana Kong Blast APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ